जिबनशैली Archives - Like For Nepal
घरमै भएका खानेकुरा मिलाएर खुवाएमा पोषणको कमी हुँदैन भनेर प्रचार गर्नु जरुरी छ
कोभिडका कारण अहिले जुनसुकै उमेर समूहका मानिसको पोषणमा प्रभाव परिरहेको छ । त्यसमा पनि स्कुल जाने बालबालिकामा कोभिडले पोषणका सन्दर्भमा धेरै नै प्रभाव पारेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । अहिले स्कुल जाने उमेर समूहका बालबालिकाको तीव्र शारीरिक विकास हुने समय हो । यो समयमा पोषणमा ध्यान पुर्याउन सकिएन भने त्यसले शारीरिक तथा मानसिक विकासमा समेत असर पुर्याउछ ।त्यसकारण अहिले कोभिडको समयमा हामीले बालबालिकाको खाना तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।नेपालमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषणको अवस्था सन्तोषजनक छैन । केही सुधार भए पनि खासै राम्रो अवस्थामा छैन । पोषणको अभावमा बालबालिका कुपोषित हुने मात्र नभइ कोभिड मात्र नभएर अन्य रोगहरुले पनि आक्रमण गर्न सक्ने खतरा हुन्छ किनकि पोषणको अभावमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ । जसका कारण कोभिड मात्र नभएर अन्य रोगहरुले पनि आक्रमण गर्न सक्छ । ...
प्रियंकालाई भेट्न मासु, लुगा र बंगुरको काचो मासु लिएर भेट्न पुगे नायक दिलीप
सुत्केरी नायिका प्रियंका कार्कीलाई भेट्न मासु, लुगा र बंगुरको काचो मासु कपडा लिएर भेट्न पुगे नायक दिलीप रायमाझी , प्रियंकालाई तिमी लास्टै मन पर्छ भनेर हातमा चुम्मन गरेपछि रिसाए पति आयुसमाान, यस्तो भिडियो किन हालेको भनेर रिसाए फ्यान, हेर्नुहोस् भिडियो प्रेममा असफल भएपछि यस्तो बेहाल अवस्थामा फेला परिन् चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारी, प्रेमीले धोका दिएपछिको चोट भुल्न सारा कुरा बिर्सेर गाउँ फर्किन्, गाउँमा अञ्जलीको देखिएको यो विकराल अवस्थालाई बाहिर ल्याए युट्युबरले, परिवारले नखिच्न भन्दा भन्दै पनि युट्युबरले खिचेरै छाडे अञ्जलीको यो ऋदयविदारक भिडियो फेरी के भयो चर्चित कलाकार आशा खड्का लाई ? आमासँग मात्रै एक्लै बस्दै आएकी आशा अचानक बाटोमा लडेपछि भइन् अस्पताल भर्ना ? अहिले कस्तो छ अवस्था ? हेर्नुहोस् यो अपडेट भिडियो हे भगवान! छट्पटाउदै २४ बर्सिय अनिता! कलिलो छोरीको बचनले रुवायो सबैलाई, गम्भि...
महानगरीय प्रहरीमा यस्तो घटना आयो जसले प्रहरीको नै होस उडेको छ । एक जना ब्यक्ति जो दिनमा केटा र रातीमा केटी बनेर अ’परा’धिक काम गर्थे । महानगरीय प्रहरी बृत्त जनसेवामा मंसिर १४ गते एक युवतीले आफु माथि ज’ब’रज’स्ती भएको भन्दै उजुरी दिइन् । प्रहरीले आ’रोपीको खोजी थाल्यो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरी नै छक्क गरे । किनभने आरोपी पुरुष नभएर युवती नै थिइन् । तर एउटा सिसीटिभी फु’टेजले भने प्रहरीलाई अनुसन्धान फरक बनाउन कर लाग्यो । घटनामा युवती नै भएको ठा’नेर प्रहरीले फेरी खोजी थाल्यो । जतिजति अनुसन्धान हुँदै गयो त्यति त्यति प्रहरी छ’क्क पर्दै गयो । तर जब प्रहरीले युवती बनेका ति ब्यक्ति पुरुष नै भएको पत्ता लाग्यो प्रहरीको होस उ’ड्यो । उनी मंगलबार पक्राउ परे । उनी दिनभरी युवक र राती भएपछि युवती बनेर हिड्ने गरेका थिए ।ती व्यक्ति हुन्, सल्यानको कुमाखमालिका गाउँपालिका ७ घर भई काठमाडौंको बागबजार बस...
काठमाडौँ : लामो समयदेखि उपचार गर्दै आएकी अनिता खड्का झन्डै ३ बर्ष पछि फेरी पुरानै अबस्थामा फर्किएकी छिन। उनि लामो समय देखि अस्पतालको बेडमा छटपटी अबस्थामा रहिरहेको सबैलाई थाहनै छ। उनको अबस्था देखेर धेरैको मन रोएको हुन्छ।अनितालाई यो अप्रेसन पछि निको भएको खबर सुनाउने परिवारको सपना भने अधुरो भएको छ। अप्रेसन सफल नभएसंगै परिवारमा यो पटक फेरी अर्को दुख भित्रिएको छ,उनि अहिले झन् बोल्न उभिन समेत सक्दिनन,जस्तो अबस्थामा पहिले अनिता रहेकी थिईन अहिले त्यस्तै देखिन्छिन उनि। डाक्टरले निको हुन्छ भने पनि अझै समय लाग्ने अनिताको उपचारमा खट्दै आएकी बिनोदकि दिदि राधाले जानकारी दिएकी छिन। बिरामी अनिता खड्का अब बोल्न नसक्ने भएपछि यति उनको परिवार तनाबमा छ ।उनको श्रीमान फेरी काममा फर्किएका छन।उपचारको लागि पैसा न भएपछि काममा फर्किएका हुन् बिनोद। सहयोग आए पनि उपचारको लागि प्रयाप्त सहयोग प्राप्त न हुदा...
काठमाडौ । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता जति चर्चित छन् त्यती नै बेलाबेलामा विवादित हुने गरेका छन् । उनले उठाउने सामाजिक विषयले उनलाई चर्चा दिलाएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको समस्यालाई समाचारका विषय बनाउने रवी लामिछाने त्यसै कारणले सबैको प्रिय पात्र बन्ने गरेका छन् । विदेशमै अप्ठेरोमा परेका धेरै नेपालीको उनले उद्दार पनि गरेका छन् । भ्रष्टाचार र राजनीतिक वेतिथीको कुरा उठाउने उनि बेला बेला विवादमा तानिने पनि गरेका छन्। तर जे भए पनि उनि अन्याय र अत्याचारमा परेका जो कसैको पनि आवाज बन्ने गरेकाले जति नै विवाद परे पनि जनताले साथ भने छाडेका छैनन्। वि सं २०३१ साल भदौ २० गते भक्तपुरमा जन्मिएका लामिछाने सिधासादा निमुखाको भरोसाको रुपमा देखिएका छन्।भर्खरै मात्र न्यूज २४ टेलिभिजन छोडेर केहि समय गुमनाम रहेका उनी आफ्नै ‘ग्यालेक्सी ४ के’मा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन्। धेरै पत्रकार...
नवलपरासी घर भइ बसोबास गर्दै आएका राजेन्द्र सुनार नाम गरेका एक पुरुषकि गरिमा सुनार नाम गरेकी द’लि’त भत्ता लिन गएकी श्रीमती १९ महिनाको दुधे बालक छाडेर गएको आज २१ दिन भैसकेको छ । अहिलेसम्म उनी सम्पर्कबिहिन छिन । श्रीमतीको खोजी गर्दै आज राजेन्द्र सुनार आफ्नी १९ महिनाकी छोरालाई काखमा च्यापेर मिडियासामु आएका छन । मिस्त्री ठेकेदारी काम गरेर जिबनयापन गरिरहेका राजेन्द्र श्रीमतीले छाडेर गएसगै निकै ठूलो स’मस्यामा परेका छन । घरमा सल्लाह गरेर नै छोराको द’लि’त भत्ता लिन गएकि गरिमा त्यसदिन साझसम्म भने सम्पर्कमै थिइन तर त्यसपश्चात भने उनी बे’खबर भएकीछिन । घरमा बुढिआमा, १९ महिनाको सानो नानी, राम्ररी सुत्न पनि पाउदैनन उनि ,क’ठै ब’रा । मिडियाकै अगाडि डा’को छाडेर रु’ए उनि । रु’दै यसो भने उनले “यो साल त धेरै द’शा लागेको छ मलाइ घर पनि बाढिले लग्यो अनि अहिले श्रीमती ।” क’ठै ब’रा ! बुढी आमा छिन तर छैन उनलाइ...
करोडौंमा छ कट्रिना कैफ–विक्की कौशलको कूल कमाई, चकि त पर्नुहुनेछ
कट्रिना कैफ र विक्की कौशलको विवाहबारे अडकलबाजीले बलिउडको बजार तातिएको छ । बलिउडका यी दुबै कलाकार आफ्नो नीजि र व्यावसायिक जीवन दुबैमा अघि बढिरहेका छन् । कुनैबेला ५० हजार तलब पाउने यी दुबै कलाकार आज करोडौंको कमाई गरिरहेका छन् । यदि यी दुईको विवाह भएको खण्डमा उनीहरुको कूल सम्पत्तिले धेरैलाई चकित पार्न सक्छ । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔं । कट्रिना कैफ बलिउडको ‘ए लिस्ट’ नायिकामा गनिन्छिन् । भारतीय सञ्चार माध्यमको रिपोर्ट अनुसार कट्रिनाले आफ्नो एउटा फिल्मको ११ करोड भारु पारिश्रमिक लिने गर्छिन् । फिल्मबाहेक कट्रिनाले विज्ञापनमार्फत् पनि राम्रो कमाई गर्छिन् । उनी स्लाइस, नक्षत्र, लक्स, प्यानासोनिक, ल्याकमे र लरियलजस्ता ठूला ब्रान्डकी सेलिब्रिटी प्रवक्ता पनि हुन् । उनी नाइकाकी पनि राम्रै लगानीकर्ता हुन् । यो फेसन अनलाइन वेबसाइट भारतमा निकै चर्चित छ । सन् २०१२ मा इकोनोमिक टाइम्सले उनला...
लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम इन्द्रेणीका सबैको मन मुटुमा बस्न सफल जोडी छत्र शाही र काजल जोशी वैवाहिक बन्धनमा बाधिएका छन् ।दोहोरी खेल्न अब्बल यी जोडीको दोहोरीलाई लाखौं दर्शक स्रोताले रुचाएका छन् । ईन्द्रेणीमा लाईभ दोहोरी गाएर चर्चा कमाएका छत्र शाही र काजल जोशी लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहँदै आएका थिए । केहिसमय अगाडि इन्द्रेणी कार्यक्रमको स्टुडियोबाटै बिबाहको घोषणा गरेका थिए । यी जोडीले गाउँमा पुगेर बिबाह गरेका हुन् । सबैको प्यारो इन्द्रेणीका कलाकार छत्र शाही र काजल जोशीबीच बैबाहिक जीवन सुरु भएको छ। काजल र छत्रबीच बिबाह भएको भिडियो बाहिरिएको हो।छत्र जन्मेको गाउँमै पुगेर दुइ बीच बैबाहिक जीवन सुरु भएको हो।घर भित्र्याउने क्रममा खिचिएको उक्त भिडियो अहिले सबैतिर भाइरल छ। झन्डै ३ बर्ष देखिको प्रेम बैबाहिक जीवनमा लागु गरेका छन।उता छत्रको बिबाहमा इन्द्रेणी टिम पनि पुगेको छ भने भिडियोमा कृ...
गत शुक्रबार गुजरातको राजधानी गान्धीनगर नजिकैको पेथापुरबाट शिवांश नामको एक बालक फेला परेको थियो । यो घटना गुजरात भरका भावनाहरु संग जोडिएको थियो र धेरै परिवारहरु गुजरात भर बाट उनको आमाबाबुलाई लिन र यो भगवान जस्तै छोरा ग्रहण गर्न आएका थिए। तर, यो सम्पूर्ण घटनाले अर्कै मोड लियो । यो घटनाको प्रतिध्वनि अझै शान्त नभएको बेला अहमदाबाद सहरबाट यस्तै अर्को घटना बाहिर आएको छ । यस्तै एउटा घटना अहमदाबाद सहरको वेजलपुर इलाकाबाट बाहिर आएको छ । भेजलपुरकी मिजोरमकी एउटी महिलाले आफ्नो बच्चालाई यताउता छोडेर गएकी थिइन् । तर, अहिले समाज सचेत भइसकेको छ र समाजका जनताले सकेसम्म यस्ता घटना हुन नदिन पहल गरिरहेका छन् । घटनामा ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो, जब महिलाले भाग्नुअघि नै स्थानीयले समातेका थिए । ती महिलालाई अहिले स्थानीयले पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका छन् । त्यसपछि फूल जस्तो बच्चाको जीआई थाहा पाएक...